Accueil > Gazetin'ny nosy > Cotona Antsirabe : Manapotika tanteraka ny tontolo iainana
Cotona Antsirabe : Manapotika tanteraka ny tontolo iainana
Orinasa lehibe iray manao lamba ao Antsirabe ny orinasa Cotona. Efa hatramin’ny ela no nitsangana ity orinasa ity ary isan’ny orinasa nisedra ny fiovaovana amin’ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara. Mpamokatra lamba ny orinasa Cotona ao Antsirabe. Tsy azo iadian-kevitra fa mampidi-bola ho an’ny firenena izany.
Ankehitriny nefa dia lasa orinasa mpanimba ny tontolo iainana tanteraka ny Cotona. Mampiasa kitay milanja 40 taonina isan’andro ity orinasa ity taty aoriana. Noho izany dia potika tanteraka ny ala manodidina an’Antsirabe manontolo. Isan’ny voakasika amin’izany koa ny distrikan’i Fandriana sy Ambositra. Raha mandalo amin’ny làlampirenena faha-7 iny isika izay manomboka avy ao avaratr’Antsirabe ka tonga hatrany Ambositra, dia mahita ny kitay manamorona ny lalàna. Fiarakodia vaventy marobe isan’andro no mitatitra izany
Ao Ankelikapona Ambositra no misy ny toerana famorian’izy ireo ny kitay sy ny hazo halefa ao amin’ny Cotona ao Antsirabe avy any atsimo. Tapitra tanteraka ny ala amin’ireo toerana ireo ankehitriny. Potika sy rotidrotika ny tanety vokatr’izany ary rava ny tontolo iainana.
Raha ny loaharanom-baovao dia ireny menaka mavesatra ireny (huile lourde) no nampiasana tao amin’ny Cotona tao Antsirabe tany ampiandohany. Novana kitay nefa izany taty afara noho ny vidin’ity menaka ity lafo noho ny kitay. Kitay milanja 14 600 taonina isan-taona no lanin’ny orinasa Cotona. Velaran’ ala an’arivony hektara isan-taona no ripaka noho izany.
Voalaza fa mamboly hazo ny Cotona io nefa ny mahagaga dia tsy any amin’ny toerana misy ny ala voleny no angalana kitay fa ny alam-bahoaka. Tsy voahaja raha izany ny fitandroana ny tontolo iainana.
Ny mahagaga amin’ity raharaha kitay ao amin’ny Cotona Antsirabe ity dia mijery izao raharaha izao fotsiny ny ministeran’ny Tontolo iainana. Miray tsikombakomba amin’ny fanimbana ny ala ve ity ministera ity?
Ingahy Andry Nirina Rajoelina dia nanao fanambarana raha tonga teo amin’ny fitondrana fa hatao vaindohan-draharaha ny fambolena hazo. 40 000 ha isan-taona no velaran-tany hovolena. Asa na firy izay no vita ? Aiza ilay “drone” hamboly hazo na handraraka voankazo, Ary mba ahoana ny fitondran’ingahy Rajoelina amin’izao fanapotehana ala ataon’ny Cotona ao Antsirabe izao?
Hiady amin’ny fanapotehana ny tontolo iainana ve isika Malagasy sa faly miresaka izany fotsiny ihany? Hatramin’izao aloha dia resaka fotsiny no betsaka eto amin’ity firenena ity.